अब कहिल्यै पनि जाँदिन विदेश ! — Himali Sanchar
अब कहिल्यै पनि जाँदिन विदेश !
हिमाली संचार संवाददाताकृष्णप्रसाद अधिकारी
दैलेख : मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि पछिल्लो समय विदेशीने युवाहरुको ताँती लागेको छ । हरेक दिन हजारौ युवाहरु विदेशीने गरेका छन् । नेपालबाट खाडी मुलुक लगायतका मुलुकमा दैनिक १५ सय युवाहरु विदेशिरहँदा जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाका युवाहरुले स्थानीय स्तरमै व्यवसाय संचालन गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।
गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्य सहित विदेशबाट फर्कीएर व्यवसाय संचालन गरेका युवाले गाउँका अन्य बेरोजगार युवाहरुलाई समेत रोजगारी दिएका छन् । भगवतीमाई गाउँपालिका – ४ का ३० बर्षिया प्रेम बहादुर नेपाली सोहि गाउँपालिकाको बेस्तडामा रहेको आफ्नै घरमा ब्यवसाय संचालन गरि मासिक २० हजार भन्दा बढि आम्दानी गरिरहेका छन् ।
दशै तथा तिज जस्ता पर्वको समयमा करिब ३५ हजारसम्म आम्दानी गरिरहेको उनको भनाई छ । तीन बर्ष मलेसियामा दुःख गरेर कमाएको रकमबाट ब्यवसाय संचालन गरेका नेपालीले हाल गाउँमै ब्यवसाय संचालन गरेर गाउँका अन्य ५ जना युवालाई रोजगारी दिनुभएको छ ।
व्यवसाय संचालन गरेर मनग्य आम्दानीसँगै छोराछोरीलाई निजि विद्यालयमा पढाउदै आएका नेपालीले बिदेशमा गएर अर्काको मुलुकमा काम गर्नु पर्ने तथा काम गरेको जति प्रतिफल पनि नपाइने बताउनुभयो । ज्यानको सुरक्षा समेत नहुने समस्याका कारण आफुले विदेश छाडेर गाउँमै आफ्नै ब्यवसाय संचालन गरेर बसेको नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले हाल सिलाईकटाई व्यवसाय तथा कपडा पसल ब्यवसाय संचालन गर्नुभएको छ । विदेश गएर फर्केका उनी बाबु बाजेले सिकेको सिपलाई व्यवस्थित गर्न अग्रसर भएका हुन् ।
आफनो व्यवसाय जस्तो अन्य कुनै पनि पेशा नहुँदो रहेछ, उहाँले भन्नुभयो ‘पहिले आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले बिदेश जानु परेको थियो, विदेश जानु कसैको रहर होइन्, बाध्यता हो ।’ घरपरिवारको आर्थीक अवस्था कमजोर भएका कारण विचैमा पढाई छाडेका नेपाली भन्नुहुन्छ ‘पढाई छोडेको भएपनि कुनै पछुतो छैन्, गाउँमै व्यवसाय संचालन गरेको छु, यहि व्यवसायबाट परिवारको गुजारा चलाउछु तर विदेश जाँदिन ।’